Shirkadda Somali Fire & Safety oo Laga Furay Magaalada Bosaso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirkadda Somali Fire & Safety oo Laga Furay Magaalada Bosaso[Sawirro]
Munaasabadan oo lagu furayay shirkadda qalabka damdamiska iyo badbaadada Soomaaliya ee SOMSAFE ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay casharo kooban oo la xiriira siyaabaha loola diriro dabka si aanu u fidin loona damiyo iyo hababka badbaado allaa wax badbaadiyee.
Munaasabada oo ka dhacday hoolka Shirkarka ee Rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland ayna kasoo qayb galeen
ganacsato, aqoonyahano, masuuliyiin ka socotay shirkadda Golis
iyo martisharaf kale.
Ugu horayn Eng C/xakiim Cali Hiirad oo ah khabiir ku takhasusay badbaadada iyo dabdaminta mudo kabadan 30sano kabadna ka shaqaynayay arimahaas kuna hadlayay magaca asaasayaasha shirkadda SOMSAFE uu dadkii madasha fadhiyay u sharaxay talaabooyinka looga hortago dabka iyo faaiidooyinka qalabka ay shirkadoodu u keentay dadwaynaha.
Eng C/xakiim ayaa xusay in qalabka ay hayaan oo isugu jira noocyo kala duwan looguna talagalay hadba nooca iyo waxa uu dabku ka dhashay ay wax badan ka anfacayaan bulshada ka hor taga khataraha dabka iyo badbaadada hantidooda iyagoo lagala qayb qaadanayo rakibida dayactirka iyo ka warhaynta qalabka hadii ay iibsadaan.
“Ma doonayno inaan qofka ka iibino qalabka oo kaliya ee waxaan uga faaii’dayn doonaa isticmaalkiisa, dayactirkiisa, iyo rakibaadiisaba waxana si joogta ah uga warhaynaynaa qofka iibsada si aanu qalabka laftiisu dhibaato ugu keenin qofka hadii uu si khaldan u isticmaalo waayo waxaan masuuliyad iska saaraynaa bulshadeena” ayuu yiri Eng C/xakiim Cali Hiirad.
Maxamed Mire Axmed oo ah maamualaha Shirkadda SOMSAFE ayaa dhankiisa sheegay in shirkadda SOMSAFE ay ku timi baahi loo qabay darteed maadaama buu yiri ay horay dheceen shilal gubasho oo xiliyo kala duwan dhacay ayna ku burburtay hanti farabadan.
Isagoo xusay in qalabkan kaalin libaax ka qaadan doonaan kahortaga iyo daminta dabka hadii ay dadku guryaha iyo
goobaha ganacsi dhigtaan.
Madaxa xiriirka dadwaynaha shirkadda Isgaarsiinta Golis Telecom Shiekh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur oo munaasabada kalmad ka jeediyay ayaa sheegay inay soo dhawaynayaan shirkadda SOMSAFE isagoo xusay in Golis Telecom ay horay uga dadaashay xakamaynta iyo ka hortaga dabka iyadoo samaysay shaqaale leh agabkoodi kuwaas oo ka qayb qaata dabka ka kaca magaaladda qaybeheeda kala duwan.
Ugu dambayn waxaa xariga ka jaray shirkadda SOMSAFE Gudoomiye kuxigeenka Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha
Puntland Maxamed Caydiid isagoo bogaadiyay shakhsiyaadkii lahaa maskaxda asaaska shirkadda oo uu ku tilmamay mid wax badan ka tari doonta dabka ka kaca guud ahaan Puntland.